Madaxweyne Biixi Oo Qaabilay Xulka Kunbadda Cagta Baahiyaha Gaarka ah Qaba | Gabiley News Online
Madaxweyne Biixi Oo Qaabilay Xulka Kunbadda Cagta Baahiyaha Gaarka ah Qaba
Madaxweynaha Somaliland ayaa maanta qaabilay kooxda kubbadda cagta ee xaga maqalka ama dhegoolayaasha oo ka soo jeedda gobolka Awdal.
Kuwaas oo ku soo guulaystay tartan ka qabsoomay dalka aynnu deriska nahay ee Jabuuti.
Kooxdan oo guul toddoba gool iyo Eber ah kasoo hoysay ciyaar kama dambays ahayd oo ay la yeesheen koox ka dhisan dalka Jabuuti.
Madaxweynaha ayaana qaabilay iyaga oo sita koobkii ay kusoo guulaysteen, waxana uu ku ammaanay dedaalka ay ku hanteen guushaas ay kor ugu qaadeen magacii qarankooda iyo kooxdiiba.
Muuse Biixi Cabdi, ayaa kooxdan soo guulaysatay ku bogaadiyey dedaalka ay sameeyeen iyo guusha ay soo hooyeen. Waxaanu sheegay inay qaran ahaan libin iyo wax lagu dhaato u tahay guusha ay kooxdani kasoo hoysay tartankii lagu qabtay dalka Jabuuti.
Waxaanu yidhi, “Waan idin soo dhaweynayaa, waan idin hambalyeynayaa, waan idiin ducaynayaa, waannu idinku faanaynaa, waana idinku dhaadanaynayaa, aad iyo aadna waanu ugu faraxsannahay sida aad wax usoo qabateen, kartidiina iyo sharaftiina.”
Sidoo kale madaxweynuhu waxa uu ammaanay awoodda iyo hibada ku lammaan dadka baahiyaha gaarka ah qaba iyo sida ay waajibka u tahay inuu qaranku uga faa’iidaysto.
Waxaanu kula dardaarmay inay sii laban-laabaan dedaalkooda iyo soo bandhigidda awoodahooda qarsoon.
Geesta kale wasiirka wasaaradda Dhallinyarada iyo ciyaaraha Boos Mire Maxamed, ayaa isna dhankiisa hambalyeeyey kooxdan xaga maqalka ama dhegoolayaasha ah oo marka horeba ahayd horyaalka kubbadda cagta ee kooxaha dhegoolayaasha ee ku dhaqan gobollada dalka.
Waxa sidoo kale halkaasi ka hadlay oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland uga mahadnaqay qaabilaada uu ku qaabiley iyo dhiirigelinta uu u muujiyey dadka baahiyaha gaarka ah qaba guddoomiyaha horyaalada heerka koowaad ee Somaliland.
Dhinaca kale Samaroon Cabdilaahi Cilmi, gudoomiye ku xigeenka dadka bahiyaha gaarka ah qaba mudane Geelle Rashiid Xuseen iyo kabtanka kooxda ku soo guulaysatay koobkii jabuuti u qabatay kooxaha dhegoolayaasha, Kabtan Sayid Maxamed Axmed.
Waalidiintii Caruurtoodu Ka Maqnaayeen oo Maalintii Labaad Banaanbax Ka Dhigay Muqdisho
Warsidaha Wales Online oo Warbixin Kaga Faallooday Dimuqraadiyadda Somaliland
Maxamed Xaashi: Doorashadii Dhacday Waxay Soo Dedajinaysaa Aqoonsiga Somaliland
Wakiilka Somaliland Ee Norway Oo Sheegay In Somaliland Lagu Bogaadiyay Doorashooyinkii
Daawo: Waraysi Lala Yeeshay Aasaasaha Barnaamijka Walaal Ila Orod
Madaxweyne Biixi Oo Kulan La Yeeshay C/kariin Axmed Mooge
Maxaa Ka Soo Baxay Shirkii Isbaaheysiga Xisbiyada Mucaaradka